Chrysanthemums ee dhulka u furan | February 2020
Ugu Weyn Ee Chrysanthemums ee dhulka u furan
Waa maxay nooca bamam ah si ay u beertaan beerta, noocyo caan ah oo ubax ah ee dhul furan
Chrysanthemums waa ubaxyo qurux badan, laakiin beeralay badan oo bilawga ah ayaa lagu niyadjabay natiijada beerashada aan ku qanacsaneyn. Inta badan waxay isku eedeeyaan naftooda. Marka aad dooranaysid noocyo kala duwan oo bamam ah oo loogu talagalay beeritaankaaga, ugu horreyntii, waxaad barataa taariikhaha ubaxyada iyo astaamaha, ka dibna ubaxu ma abuuri doono wax dhibaato ah, waxayna ku farxi doonaan isha ilaa xilliga dayrta.
Gaabasho gaaban, oo hore u-bislaaday oo yaanyo badan oo tamaandho ah "Ob domes", sharaxaad iyo talooyin ku saabsan daryeelka
Tamaandho aan caadi aheyn "Golden Flames": sharaxaadda kala duwan, sifooyinka iyo astaamaha beerashada
Hibiscus-ga xashiishka ah: beeridda iyo ku-tallaalidda gacmahaaga
Devil's Spine ama Pedilanthus - succulent gaar ah
Waa maxay qolofta shimbiraha, yaa ah wakiilka cudurka iyo sida loo daweeyo?
Casaan (caadi) waa geed oo leh timirta pyramidal ee foomka saxda ah. Goobta iyo laanta geedka ash buurta ah waxaa lagu daboolaa jilif jilicsan. Heerka dhirta waxaa la gaari karaa 15-16 mitir. Faahfaahinta ash buurtu waxay u qalantaa inay ka bilowdo aagga koritaanka. Waxay ka kooban tahay qaybta yurub ee CIS, iyo sidoo kale dhulalka Caucasus, Siberia, Bariga Fog, Amur, Kazakhstan iyo Kyrgyzstan. Read More
Hilibka hilibka ah: faa'iido iyo waxyeelo
Kallortro koritaanka ka soo abuur, talooyinka u bannaanka u ah
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Chrysanthemums ee dhulka u furan 2020